Baarlamanka Soomaaliya oo Guddoomiye cusub doortay, kii horena Xilka ka qaaday | Berberanews.com
Home WARARKA Baarlamanka Soomaaliya oo Guddoomiye cusub doortay, kii horena Xilka ka qaaday
Baarlamanka Soomaaliya oo Guddoomiye cusub doortay, kii horena Xilka ka qaaday
Muqdisho-(Berberanews)- Guddoomiye cusub ayaa maanta loo doortay hoggaaminta Baarlamanka Soomaaliya, ka dib markii Guddoomiyihii hore cod hal-dheeri ah xilka kaga xayuubiyeen 280 Mudane oo ka tirsan Xildhibaannada aqalka Baarlamanka ku-meel-gaadhka ah ee Soomaaliya.
Gudoomiyihii Baarlamanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayey Xildhibaannadu sheegeen inay xilkii Guddoomiye nimo ka qaadeen, kaa beddelkiisana ay shirguddoon cusub u doorteen Xildhibaan Madoobe Nuunow Maxamed, kaasoo isla maantaba loo dhaariyey xilka loo igmaday.
Kulanka oo ay ka soo xaadireen 283-Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo maanta ay ku yeesheen Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, ayaa 280 Mudane oo ka mid ahi waxay isku raaceen in xilka laga qaado Shariif Xasan Sheekh Aadan , waxaana ka aamusay laba Mudane sida uu sheegay Xildhibaan Madoobe Nuunow oo la wareegay guddoominta shirarka Baarlamaanka.
Xildhibaannada u codeeyay in la rido Guddoomiyihii hore mid cusubna la doorto, waxay sheegeen in ku xigeennadii Shariif Xasan ay ka dhego-adaygeen in xilka Guddoomiyenimada loo doorto “Waxaan taageersannahay heshiiskii Kampala, sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno beesha calaamka iyo Midowga Afrika,” ayay sheegeen xubnihii ku shiray golaha shacabka, iyagoo xusay in laga been abuuray oo laga faafiyay inay yihiin xubno kasoo horjeeda 10-kii qodob ee Kampala Accord.
Xildhibaan Madoobe Nuunow ayaa lagu dhaariyay fadhiga lagu doortay, isagoo sheegay inuu howsha loo dhiibtay u gudan doono sida uu sharcigu waafaqsan yahay, lagana doodi doono maalmaha soo socda mooshinno fara badan oo horyaalla baarlamaanka.
Tallaabadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka, Shariif Xasan uu dalka ka maqan yahay, waxaana xildhibaanada kulanka yeeshay ay dhowr jeer oo hore kulammo ay uga soo horjeedaan afhayeenka baarlamaanka ku yeesheen hoteello ku yaalla Muqdisho.
Mudanayaashan ayaa waxay ku eedeeyeen guddoomiyaha baarlamaanka dhowr qodob oo ay ka mid yihiin xil gudasho la’aan iyo inuu ka leexday waajibaadkii loo doortay uuna gudo-galay howlo uusan lahayn, iyagoo sheegay inay taasi keentay inay maanta kulankaan ku yeeshaan xarunta baarlamaanka ayna xilka uga qaadaan.
Xildhibaannada taageersan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa qaadacay coddeynta, iyagoo sheegay inay iyaguna dhawaan qaban doonaan shir kale oo ay ku qaadacayaan kulanka maanta xilka looga qaaday guddoomiyaha baarlamaanka.
Arrintan ayaa waxay u muuqataa mid sare u sii qaadaysa khilaafka u dhexeeya baarlamaanka, iyadoo aysan jirin wax hadal ah oo kasoo baxay Shariif Xasan iyo madaxda kale ee xukuumadda dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Previous articleMuxuu ka hor-yidhi Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Mudanayaasha Goalaha Guurtida oo uu warbixin u jeediyey?
Next articlePanetta: Djibouti critical to US terror fight